Manome voninahitra farany ilay olomangan’ny football arzantinianina Maradona i Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
"Reko i Bangladesh mitomany"
Voadika ny 07 Desambra 2020 4:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Español, বাংলা
Miely ao Bangladesh ny fitiavana fatratra ny Football. Milalao football eo anoloan'ny rindrina voaloko sainam-pirenena isankarazany mpandray anjara amin'ny mondialy FIFA. Jatrabari, Dhaka. Saripikan'i Sourav Lasker. Copyright Demotix (8/6/2014)
Mitovy laza tahaka ny ao amin'ny fireneny ny lazan'ilay kintana lehibe Arzantiniana amin'ny football Diego Armando Maradona ao Bangladesh. Nahatohina ny Bangladeshita maro, izay niditra tamin'ny tambajotram-piarahamonina haneho ny lanjan'ilay olomalazan'ny football ho azy ireo ny fahafatesan‘i Maradona tao Buenos Aires tamin'ny 25 Novambra 25.
Mpisera Twitter Akteex namehy ny fahatsapan'ny firenena iray ato amin'ity paositra fohy ity:
Henoko i Bangladesh mitomany
Tamin'ny fanamarihana fa lasa anarana mahazatra ao Bangladesh ny Maradona, namaly ny mpiondana football Sabbir:
Fantatro ny anarany raha iverenana ny tsiaro voalohany indrindra tato amiko. Tamin'izany fotoana izany aho zaza niaina tany amin'ny tanàna iray saro-dalana ao Bangladesh, ary nihevitra fa raha afa-mandeha lavitra aho dia hianjera amin'ity tontolo ity satria mahitsy marin-drano izany, saingy fantatro ny anarana Maradona. Izany no mahangeza azy.
Ny ampitson'io indrindra, nanome voninahitra an'i Maradona tamin'ireo lanonana isankarazany ny Bangladeshita, tahaka ny tamin'ity lalao cricket tao an-drenivohitra Dhaka ity:
Iray minitra fahanginana notanterahan'ny ekipa efatra ho an'ity olomangan'ny Football izay tsy iza fa i Diego Maradona ity. Nitranga izany taorian'ny fanolorana taorian'ny lalao tamin'ny lalao voalohany.
Vakio ihany koa: Caribbean football enthusiasts mourn the passing of Diego Maradona
Na dia faramparan'ny laharana aza ny firenena aziatika atsimo amin'ny filaharan'ny football FIFA manerantany, dia tena malaza tokoa ilay fanatanjahantena. Manaraka ny ligy football Amerikana Latinina ny ankamaroan'ny Bangladeshi ary manandratra olomanga tahaka an'i Maradona sy i Pele avy ao Brezila. Misy aza moa ny mpiondana no tsy mino fotsiny izao fa efa tsy izy intsony i Maradona.
Anisul Kabir, toania mpiara-miasa ao amin'ny gazetiboky mpanao esonteny Unmad, no manoratra ao amin'ny Facebook:
Tsy miaina intsony ilay fahagagana antsoina hoe Maradona, sarotra atelina izany. Namoy fanorolahy ny tontolon'ny football. Tena malahelo aho androany.
Nanampy ilay mpientanentana amin'ny fanatanjahantena Noman Mohammed:
Tiako ilay vaovao fahafatesan'i Maradona ho hoax [lainga]. Niezaka aho ny hitety ireo tranonkala iraisampirenena isankarazany hahita ny marina. Saingy tsy marina ilay faniriako.
Nisioka iTazin nandritra izany fotoana izany:
My condolences to his #Family & #Friends We LOVE You ❤ pic.twitter.com/0ZcrIp6x1L
Nandao antsika ilay olomangan'ny football Diego Maradona tamin'ny 25 novambra.
Tahaka ireo firenenkafa dia betsaka koa ao Bangladesh no mpiondana hatramin'ny lala-nodiaviny tamin'ny football. Nihalehibe tamin'ny fahagagana nataony teny an-kianja isika.
Mandria am-piadanana Maradona
Fiaraha-miory amin'ny fianakaviany sy ny namany Tia anao izahay ❤
Lasa mpanohana ny ekipan'i Arzantina football ny ankamaroan'ny noho ny fahaizana mahatalanjona nasehon'i Maradona nandritra ny fandreseny tamin'ny mondialy 1986. Tao amin'ny Facebook i Sakibur Rahman Khan nanazava:
Tamin'ny taona 1982, ny mpanao didijadona Hossain Mohammad Ershad nampitolagaga ny firenena tamin'ny nandefasany mivantana voalohany tamin'ny fahitalavitra ao Bangladesh ny Mondialy. Izany ny fahazazako nijery lalao, lasa mpiondana football Latina-Amerikanina tahaka ny hafa maro aho, indrindra fa i Brezila. Tamin'izany fotoana izany, tsy dia nahalala zavatra maro momba an'i Maradona aho. Rehefa nanomboka ny Mondialy tamin'ny taona 1986, Bangladeshita maro no revo tamin'ny talenta tsy mampino nananan'i Maradona tamin'ny football. Nisara-kevitra ny olona tao Bangladesh. Manodidina ny atsasaky ny mponina tao Bangladesh rno nifahatra tamin'i Brezila ary ny atsasany hafa kosa nanohana an'i Arzantina. Ampahany maro ao Dhaka, indrindra fa Aminbazar, no rakotra sainam-pirenena Arzantina. Nanjaka i Maradona tokony ho roapolo taona taorian'izany.
Vakio ihany koa: Brezila sa Arzantina? Tonga Hatrany Bangladesh Ny Fifanandrinana Amin'ny Fiadiana Ny Amboara Eran-Tany Amin'ny Baolina Kitra
Tsaroan‘ilay Bangladeshi Sardar Jobayer Hossain nandao ny tanindrazana noho ny asa ny nahatonga an'i Maradona ho olomanga tao Bangladesh:
Vita printy tamin'ny hajian-tsekoly sy amin'ny harona fiantsenana ny sarin'i Maradona, ny saina Arzantinianina – manga volondahitra sy fotsy — printy amin'ny rindrina. Ny fahazazanay moa dia feno ny sarin'i Maradona 1,60 metatra. Misy restaurant shinoa iray ao amin'ny lalana Mirpur ao Dhanmondi nomena ny anarana Maradona. Nisy ireo lalaom-pirahalahiana tao amin'ny toerana misy anay nomena ny anarana ekipa Brezila sy Arzantina, izay indraindray miafara amin'ny fifandonana. Taorian'ny taona 1986, nahazatra ahy ny nananga-tsaina tao an-trano — ny iray an'i Arzantina ary ny iray an'ny Dhaka Mohamedan [ekipa football ao an-toerana]. Fahiny tokoa!
Tena mahery tokoa ny lazan'i Maradona tao Bangladesh ka mahatonga ny fandresen'i Arzantinina — na ny fahalavoany — ho azy ireo ihany koa. Tamin'ny mondialy 1990, raha niondrika i Arzantinina nanoloana an'i Alemaina tamin'ny famaranana, niara-nitomany tamin'i Maradona i Bangladesh. Raha ny marina, maro ireo mpiondana, tsy mety manaiky faharesena, nidina an-dalambe hanohitra ny fihetsiky ny mpitsara.
Tamin'io taona io ihany, Moudud Ahmed, filoha lefitr'i Bangladesh tamin'izany fotoana izany, nanambara fa hitsidika ny firenena i Maradona, saingy tsy tonga velively izany. Voalaza taty aoriana fa ny tanjon'ny fanambaràna dia ny handresena ireo hetsi-panoherana ny fitondrana tamin'izany fotoana izany.
Efa nisy ireo fikasana hafa mba hitondrana ilay maherifon'ny football ho ao Bangladesh: tamin'ny taona 2008, raha nitsidika an'i India eo akaiky izy, sy toa maneso, ity taona 2020 nahafatesany ity. Noheverina ny hitsidika ny firenena izy hankalaza ny fahazato taona nahaterahan’ny Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, ny “Rain'ny Firenena” sady filohan'i Bangladesh voalohany.
Tamin'ny taona 1994, nandray anjara farany ny mondialiny i Maradona. Nandritra izany fotoana izany, voarara tsy hahazo hilalao izy fa nandray fampahatanjahana, nahatonga an'i Arzantina hiala an-daharana tamin'ny fifaninanana. Ny mahavariana, tsy i Maradona no nahatezitra ireo Bangladeshi mpiondana fa ny FIFA.
Nisioka izany fotoana izany ny mpanatontosa filma fampahafantarana Asef Hadi:
“Rehefa nesorina tamin'ny Mondialy 94 i [Maradona]: anjatony maro tao Bangladesh no nikasa hamono tena faobe vokatr'izany, sarotra tanterahana ny manitatra befahatany ny halalina sy ny herin'ny lazan'i Maradona. Mandria am-piadanana Diego
Na dia be aza ny fitiavan'ny Bangladeshis an'i Maradona, misy ireo izay tsy tia ny fomba fiainany. Nisioka ilay mpanoratra Bangladeshi an-tsesitany Taslima Nasrin:
Fiankinan-doha no nahafaty an'i Maradona
Tsy isalasalana fa mafy ny fiainana nozakain'i Maradona, saingy tao anatin'ny sarotra sy ny mora, fantany ny fahatsapan'ny Bangladeshis momba azy: voatondro ao amin'ny boky fitantaran'ny tenany ny fiainany mitondra ny lohateny hoe “El Diego” ny fankamamian'ity firenena Aziatika atsimo ity ilay Amerikana tatsimo kintan'ny baolina fandaka — ary efa ampy izany ho an'ny Bangladeshis sasany.